China Voc na-agwọ Ọgwụ sistemụ ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya, ndị nrụpụta Kpọrọ Ahịa | Ikuku
Tag Archives: Usoro Ọgwụ Voc
Innovation, magburu onwe ya na ntụkwasị obi bụ ụkpụrụ bụ isi nke azụmaahịa anyị. Kpụrụ ndị a taa karịa mgbe ọ bụla bụ ihe ndabere nke ihe ịga nke ọma anyị dị ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ na-arụ ọrụ maka Usoro Ọgwụ Voc,Sistem Ventilator Recuperator , Aseptic Roomlọ Ime Ahịa , Agbanwe Speed ​​Air njikwa Factory, Dị ka otu ndị nwere ahụmahụ anyị na-anakwere iwu ndị a na-eme. Ebumnuche bụ isi nke ụlọ ọrụ anyị bụ iwulite ebe nchekwa na-enye afọ ojuju maka ndị ahịa niile, ma setịpụ njikọ azụmaahịa obere azụmaahịa mmeri ogologo oge. Anyị na-echekarị ma na-eme omume kwekọrọ na mgbanwe nke ọnọdụ, ma too. Anyị na-achọ ka mmezu nke uche na ahụ anyị bara ọgaranya tinyere ndị dị ndụ maka sistemụ ọgwụgwọ Voc, ndị otu ọkachamara na injinia ga-adịkarị njikere ijere gị ozi maka ndụmọdụ na nzaghachi. Anyị na-enwe ike na-enye gị n'efu n'omume izute gị chọrọ. O yikarịrị ka a ga-arụpụta mbọ kachasị mma iji nye gị ọrụ na ngwa ahịa kacha mma. Mgbe ị masịrị azụmaahịa anyị na ihe anyị, gbaa mbọ hụ na ị gwara anyị okwu site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị ngwa ngwa. N'ịchọ ịmata ngwa ahịa anyị na mgbakwunye ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị iji lelee ya. Anyị ga-anabatakarị ndị ọbịa sitere n'akụkụ ụwa niile na azụmaahịa anyị iji mepụta mmekọrịta azụmahịa na anyị. Gbalia ihu na inwere onwe gi igwa anyi maka obere ahia ma anyi kwenyere na anyi ga ekesara ndi ahia anyi ahia kachasi nma.
Ogwe ikuku dị ọcha kwụ ọtọ na-eme ka ụdị ikuku dị n'usoro nke ịdị ọcha nke otu ụzọ na-aga, nke na-ejikọ ụda olu dị ala, ikuku nsogbu na arụmọrụ dị elu na nhazi otu. Ngwaahịa a nwere ike ịmụta nkewa bench iji belata mmetụta site na vibration.It bụ ụdị nke ikuku ọcha ngwá enye a ike egosipụta ọtụtụ maka obodo elu-ọcha environment.The ojiji nke ngwaahịa a nwere ike melite usoro ọnọdụ ， welie nke ...
Super singzụta maka Ahu System Emeputa - Ikuku Igwe - Airwoods
Tupu onye ọrụ ahụ abanye n'ime ụlọ ahụ dị ọcha, a na-eji ikuku dị ọcha na-afụ uzuzu uzuzu nke uwe ya, iji gbochie ájá ahụ n'ikuku ikuku ma belata ọnụahịa arụmọrụ nke ime ụlọ dị ọcha n'ụzọ dị irè. Site na ntinye nke onye uzo abuo na-abanye site na ntaneti eletriki, a na-enye ya ohere imeghari oge maka ikuku mmiri, itinye aka na akpaka amalite. Enwere ike iji otu otu, ma ọ bụ nwee ọtụtụ nkeji maka ikpokọta ...
Ezigbo ego ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụlọ dị ọcha - 2MM Self Leveling Epoxy Floor Paint - Airwoods
JD-2000 bụ agba mmanụ-enweghị mmanụ epopo abụọ. Ọdịdị dị mma, ájá & corrosion na-eguzogide ọgwụ ma dị mfe ihicha. Usoro ụlọ nwere ike ijikọ ya na ntọala siri ike ma nwee abrasion na-eyi nkwụsi ike. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ike ụfọdụ, nguzogide na-eguzogide ọgwụ ma nwee ike iburu ibu ụfọdụ. Ike mkpakọ na ikike iguzogide mmetụta dịkwa mma. Ebe eji: A na-ejikarị ya eme ihe maka ebe na-adịghị uzuzu uzuzu na nke na-abụghị nke nje dị ka ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ ọgwụ ...
Ọrụ Equipmentlọ Ọrụ Ọhụrụ 2020 Ọcha - Benlọ Ọrụ Laboratory Steel - Wood - Airwoods
Ben-Laboratory Bench-C-etiti ma ọ bụ H-etiti na-eji ogwe igwe 40x60x1.5mm, ya na nkwonkwo jikọtara site na ijikọ akụkụ njikọta nke etinyere na mbadamba igwe. Ọ bụ ezigbo ibu na-amị ikike, nnwere onwe siri ike na ịdị mfe nke mmezi mgbe ejiri kpọgidere kabinet.
China Gold Supplier for Class 1 Clean Room Design - Laboratory Nchekwa Cabinet - Airwoods
Laboratory Nchekwa Cabinet Dị ka dị iche iche chọrọ na nzube, AIRWOODS ọnọde dị iche iche iche iche nke laabu nchekwa kabinet usoro, gụnyere reagent kabinet (ọgwụ kabinet), arịa kabinet, ikuku cylinder kabinet, mkpuchi, sample kabinet na ịgba akwụkwọ kabinet, wdg a na-nkewa ngwaahịa. n'ime ụdị ígwè niile, ụdị aluminom na ụdị osisi na ụdị osisi niile, wdg, dịka ihe si dị, ya na ngwaọrụ ikuku nke nhọrọ.
N'ogbe salọ Mwube Alọ Dị Ọcha - Nrụgide Nrụgide Nwere Ntinye - Airwoods
Bolọ ndozi na-adịghị mma bụ ngwa ọrụ dị ọcha, nke a na-etinyekarị na ọgwụ na-atụle ma na-etinye ihe iji gbochie ntụ ntụ ahụike ka ọ ghara ịgbasa ma ọ bụ bulie ya, iji zere mmerụ ahụ maka ahụ mmadụ na izere mmetọ ikuku n'etiti oghere ọrụ na ụlọ ọcha. Principlekpụrụ ọrụ: filtrated airborne ahụ si wọkspeesi ikuku na onye ofufe, isi arụmọrụ iyo, ọkara arụmọrụ iyo na HEPA, ọjọọ mgbali erikpu ụlọ ndozi vert ...
Emeputa maka Iso Cleanroom Design - Rabbet Type Glass Magnesium Laminboard - Airwoods
Rabbet ụdị Glass magnesium laminboard. Irè obosara: 1150mm ọkpụrụkpụ: 50mm - 150mm (dị ka chọrọ nke ndị ahịa) Ogologo: Ọ na-mere dị ka mkpa nke ọgwụgwụ ọrụ na oru ngo chọrọ. Isi ihe: Glass magnesium olulu isi, iko magnesium rock ajị, iko magnesium ụfụfụ, iko magnesium aluminom n'ụgbụgbọ mmanụ a ,ụ, iko mmanụ magnesium n'ụgbụgbọ mmanụ abụ. Ọdịdị Erection na ngwa: Rabbet nkwonkwo. Ọ na ọtụtụ-eji: Ime ụlọ na n'èzí mbadamba ọcha factory buildin ...
China Ọhụrụ Ngwa Ọcha Ngwaọrụ Elektrọnik - Mpepu Mpekere Sanwichi Igwe - Airwoods
Product aha: ọnụ iko ajị Sanwichi ogwe Product iwebata: Nkọwa: ọnụ iko iko ajị mkpuchi Sanwichi nzukọ nzute obosara: 950 mm - 1150 mm ọkpụrụkpụ: ọkpụrụkpụ nke 50 mm - 150 mm (dị ka ndị ahịa chọrọ) Ogologo: dị ka onye ọrụ mkpa na ihe oru choro na imeputa ihe eji eme ihe: isi ajị nke echichi nke ihe owuwu na USES: ọnụ ọnụ ụlọ ọrụ ọnụ ọnụ iko ajị ajị ajị anụ ụlọ na-ejikarị eme ihe: ịchọ ọkụ ọkụ a ...
Orylọ ọrụ maka ọgwụgwọ Ọhụrụ Ikuku - Ọsọ na-agba ọsọ - Airwoods
Ọnụ ụzọ na-agbagharị agbagharị bụ ọnụ ụzọ nkewapụ na-enweghị ihe mgbochi nke nwere ike ịgbanye ngwa ngwa ma ọ bụ gbadaa na ọsọ ọsọ karịa 0.6m / s, onye ọrụ ya bụ iche iche ngwa ngwa iji mee ka ikuku dị elu na ọkwa enweghị ntụ. Ọ na ọtụtụ-eji ubi dị ka nri, chemical, akwa, electronic, ụlọ ahịa, na friji, lọjistik, warehousing, wdg Njirimara nke Ebumnobi Power: breeki Motor, 0.55-1.5kW, 220V / 380V AC ike ọkọnọ Control System: Micro- kọmputa ugboro mgbanwe mgbanwe njikwa Voltaji nke njikwa: Nchekwa l ...
Ọnụahịa ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ nhicha nri - ụlọ mkpuchi iko abụọ - ikuku ikuku
Njirimara: Desiccant adsorbs mmiri vepo na oghere iko Sanwichi, ọ nwere ike igbochi iko nwere alụlụ si okpomọkụ dị iche n'etiti ime ụlọ na n'èzí (Omenala otu iko nwere alụlụ si okpomọkụ dị iche n'etiti ime na n'èzí), na-iko ọcha na chawapụrụ , iji jide n'aka na windo gosipụtara arụmọrụ. Ọ dabara maka ụlọ mposi, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ nyocha, ụlọ ọrụ elektrọnik, wdg. Ntuziaka nka na ụzụ: Nha ọkọlọtọ (mm) 1180 x 1000 1 ...
Lọ ọrụ na-arụpụta ihe maka ikpo ọkụ ikuku ikuku sistemụ ikuku - ikuku ikuku - airwoods
Ọrụ ụlọ dị ọcha, Iso 8 Roomlọ Na-ehicha Ọcha, Chilọ Chiller Sistemụ, Marklọ ahịa Chiller System, Roomlọ Dị Iche Iche Ikuku sistemụ ụlọ, Iwuli Ulo di ocha, Cleanlọ Ime Roomlọ Dị Ọcha, Iso Class Cleanroom Supplier, Rooftop Ikuku Ijikwa Unit,